Guurka wakiilka la isaga noqdo oo dhaleecayn loo jeediyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guurka wakiilka la isaga noqdo oo dhaleecayn loo jeediyey
Guurka la is wakiisho
La daabacay tisdag 10 februari 2015 kl 19.36
Muddaadii lagu guda jirey soo ban-dhigga mooshinnada ee xubnaha baarlamanka ayuu xisbiga Sverigedemokraterna (SD) ku soo ban-dhigay mooshin ka kooban 13 qodob, midkaasina oo la xiriira siyaasadda qooyska ee xisbiga.
Qodobbada uu xisbiga SD soo ban-dhigey ayey ka mid yihiin in la xeereeyo xaqiijinta waalidka ilmaha inta ay uurka ku jiraan, waa haddii aaney labada waalid si sharci ah isu-qabin, in la adkeeyo xeerka wakiilka ee ilmaha aan qaan-gaarin ama cidda aan masuuliyadda iska qaadi karin, waxa loo yaqaanno - godman-ka iyo wixii la mid ah. Sidoo kale mooshinkan oo ka kooban 13 qodob ayey ka mid yihiin in la xaaraantimeeyo guurka la is wakiisho, sida uu sheegay Mikael Eskilandersson, kana mid ah xubnaha xil-dhibaannada ee xisbiga SD ugu jira baarlamanka:
- Fullmaktsäktenskap waa marka ruux guur loogu wakiisho oo cidda guursanaysa uu wakiil ka noqdo baadari ama iimaam, sida uu sheegay Mikael Eskilandersson.
Dhanka kale ayuu dalka ka hir-galay 1-dii bishii luulyo ee sannadkii ina dhaafay 2014 xeer mamnuucaya iney hayadaha dalku aqoonsadaan guurka ku dhaca wakiil cid laga noqdo. Waa haddii ey shakhsiyaadka is-guursanaya uu midkood dalkan ku dhaqan yahay. Hase yeshee ey xubnaha SD ee mooshinka soo ban-dhigey ku doodeyaan in la mamnuuco mar haddiiba uu guurkaasi ka dhacay dalka dibaddiisa, intii aaney shakhsiyaadka is guursaday dalkaba iman. Hase yeeshee uu Mikael Eskilandersson sheegay in aannu wax fikir ah ka heey-san baaxadda ey tiradani le'eg tahay, sida uu hadalka u dhigay:
- Wax war ah kama aan hayo, mana arag meel baaritaan lagaga sameeyey oo lagu qeexey tirada dadyoowga isku guursada waakiilashada, sida uu sheegay.
Hase yeeshee uu ku macneeyey sababta ey mooshinkan u soo jeediyeen iney ugu wacan tahay maadaama dalkan la isu guursado jaceeyl ee aanu guurku ahayn mid qandaraas lagu galo. Mar uu middaa ka warramayeyna waxaa ereyadiisa ka mid ahaa:
- Dhaqan ahaan wuxuu dalka Iswiidhen guurkiisu ku xiran yahay jeceeyl ka dhexeeya laba ruux oo aan ku saleeysneyn qandaraas.
Marka u fahmi meey-saan haddaan dhab kuu fahmay inuu jaceeyl ka dhexeeyn karo mar haddii guur wakiil ah la isku guursadey ama uu dhacay?
- Inta badan waa heshiis ka dhex dhacey qaraabada, mana dhacdo ama u maleeyn maayo in guurka wakiilka ku dhaca uu ka dambeeyo jaceeyl ka dhexeeya labada ruux, sida uu sheegay Mikael Eskilandersson, kana mid ah xubnaha xisbiga SD u matala baarlamanka oo dhowaantan gudbiyay mooshin lagu soo jeediyey in la xaaraantimeeyo guurka wakiilka ku dhaca.